Impilo, Abantu abanokukhubazeka
Orthosis amadolo ngokuhlanganyela - into esisemqoka hhayi kuphela kubagijimi, kodwa abantu abaningi, ikakhulukazi ebusika, uma iqhwa, futhi ukuhamba le migwaqo ezingaphephile.
Yiqiniso, ngenxa yokulimala ekwakhiweni ezinjalo ngeke ugcine, kodwa elizoba Ilokhi esinokwethenjelwa kwedolo ukuvimbela Ukwenyela, futhi babe esisemqoka, uma wonke umuntu ofanayo walimala.
Ngokuvamile abantu abanezifo rheumatologic, ezivamile amadolo isifo ngokuhlanganyela kakhulu. Kulokhu, ukuza amadivaysi usizo Immobilizing, isibonelo, orthoses amadolo ngesimo bands "knee pads". Uma usebenzisa lo mkhiqizo, ungehlisa syndromes ubuhlungu, izimpawu ukuvuvukala, ukuthuthukisa umsebenzi amadolo flexion.
Esisemqoka orthosis amadolo ngokuhlanganyela futhi ezimweni lapho linganciphisa umthamo wamandla zokusebenza kwedolo futhi ububonisa ukuntengantenga yakhe ashukumisayo ngenxa isimo eziya ziba zimbi we nemisipha ehlaselwe isifo.
Orthosis - eziyinkimbinkimbi ekwenzeni isakhiwo wamathambo esakhiwa plastic, metal kanye izindwangu. Amadolo orthoses, ukwazi ukusebenza ngendlela elandelayo: ukulungisa, ukulungisa, olungaba isinxephezelo, wehlise endaweni ka indawo ubuhlungu.
imikhiqizo Wamathambo zihlukaniswe eqinile semi eqinile kuye yinkimbinkimbi ukulimala noma isifo concomitant. Ngakho, orthoses kanzima elisetshenziswa dislocations, waphuka, acute isigaba okuqhubekayo sifo we ngokuhlanganyela kwedolo.
Amadolo umkaki Genutrain
nokucwala Wamathambo namuhla ukunikela anhlobonhlobo orthesis imiklamo, kodwa phakathi kwezinye izihloko kahle umkaki phezu kwedolo ngokuhlanganyela Genutrain.
Wenziwe super nokunwebeka, esiwuhogelayo ukuluka Indwangu, okuyinto futhi kususa umswakama kahle futhi ukhululekile kakhulu ukugqoka.
Ngenxa ezivuzayo uhlangothi, akukho kinked ezinzwa izinyanda ngaphansi ivi. Tyres afakwe kahle ngaphansi izici yokwakheka nesineke. It has abicah ifaka ukuthi ubambe design kakhulu, isisindo ukukhanya.
Ngokungafani ukhonkolo, ngenkathi egqoke orthosis akuyona waphawula imisipha yoma waphawula inkululeko nasemilenzeni. Ngaphezu kwalokho, sibonga design kanye Indwangu ekhethekile impahla kuthuthukisa kwegazi ngesikhathi indawo yokulimala noma isifo, massage and kudala nomphumela ukufudumala, ekhuthaza ukuphulukiswa esasizosheshisa.
Akunakwenzeka ukukhetha umkaki kwedolo. Indlela ukukhetha Kulezo zimo? Usizo can kuphela udokotela, ngubani, kucatshangelwa imininingwane yokugula kwakho noma ukulimala uyonika izincomo kunesidingo. Futhi khumbula, imilenze wamathambo futhi amabhandeshi ayikwazi ukwelapha lesi sifo ka joint amadolo, bona kuphela ukukhonza ibhekwa ukuphathwa eyisisekelo njengoba, asize ekudambiseni ubuhlungu, ukuvuvukala, ngcono ukuzinza motion e kwedolo, enze kube nokwenzeka ukuba ukuthutha ngokuqiniseka phila ukuphila okuvamile.
-Down syndrome: kungakhathaliseki indlela yokwelashwa kutholakala?
Ukuvuselelwa izingane ene-cerebral palsy: incazelo izindlela
Dislocation azalwa naso we okhalweni: izimbangela, izimpawu, ukwelashwa
Cerebral Palsy odokotela: Lona umusho noma cha
Ukukhubazeka - a ... Ukusungulwa yokukhubazeka, uhlu izifo. nokuvuselelwa kwabantu abakhubazekile
Indawo egcina amagugu esizwe "Grand Isakhiwo Russian" - indawo kuwufanele ukuvakashelwa
Izinga lokuhamba abantu futhi iyasebenza
Technique Ukuhamba kwe-Nordic ngezinduku: ukufundiswa ngabantu abadala, isithombe. Ukuhamba kwe-Nordic ngezinduku: Izinsiza kusebenza bahamba kwesisindo Izibuyekezo
Wedding akufake ekwindla: izesekeli, ngokuvumelanayo umphelelisi isithombe
Umqondisi "Gazprom" Siqaphele inhlalakahle kazwelonke
SEC "Reutov Park" yezitolo: nithenga uhlu Enchanted
Tiutchev inkondlo ukuhlaziywa "Kugcine Uthando", "Autumn Evening". Tiutchev: ukuhlaziya le nkondlo "The Storm"
Metropolitan Stefan Yavorsky: Biography, ukubukwa